Ogaden News Agency (ONA) – Breaking News: Haayada African Right’s Monitor oo ka hadashay Shirka Qaramada Midoway
Breaking News: Haayada African Right’s Monitor oo ka hadashay Shirka Qaramada Midoway
Mudane Cabdullaahi, Masuul kamida Ururka African Rights Monitor ayaa ka hadlay Shirka Qaramada Midoway ee Lagu qiimeynayo arrimaha dadyowga Xuquuqdooda la xaqiro.
Mudane Cabdullaahi ayaa warbixintiisa oo ku baxaysay luqada Faransiiska (French) waxa uu ku bilaabay hadalkiisa hadii aan la ilaalin xuquuqda aadamaha waxay keenta musiibooyin Bani-aadanimo. Dhibaatada ka jirta Dhulka Ogaden waxaa keenay iyada oo Dowlada Ethiopia aysan dhowrin xuquuqda aadamaha midaas oo keentay in tacadiyo loo geysto shucuubta Soomalida Ogadeniya, Arrintan waxaa kale oo horseeday in musiibooyin kale oo bani aadanimo ka dhacaan dhulkaas sida aabaaraha iyo cuno yari saameysa shacabka Soomalida Ogaden. Dhibaatadaas oo idil waxaa loo aaneyn karaa Dowlada Ethiopia oo daryeelin xuquuqda aasaasiga ah ee shacabku leeyahay.
Taliska Ethiopia cadaadiska ay u geysatay shucuubta waxaa kamida Xasuuq iyo Tacadiyo iyada oo Taliska Ethiopia ay laashay garna waaqsanwayday codsiyadii uga imanayay Qaramada midoobay ee kamidka ahaayeen in loo oggolaado Qaramada Midobay dad madax banaan oo baadhitaano ku sameeya dhibaatada halkaas ka jirta intay le’egtahay.
Waxaa dhowaan kusoo biiray Xaalada Qalafsan ee Ogaden, kacdoomo ka dhacay dhulka Oromada iyo Axmaarada halkaas oo Ciidamada Ethiopia ay ka geysteen tacadiyo ay ku hor istaagataan shucuubtaas inay si xor ah oo nabad galyo ah ugu mudaharaadaan.
Warbixinta Mudane Cabdullaahi Masuulka Haayada African Rights Monitor dib kala soco iyada oo faah faahsan.
kasla Soco ONA kolba waxa kasoo kordha Kulanka Qaramada Midobay ee Geneva maanta ka furmay oo muddo laba maalmood ah Socon doona.